I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-ASIAN FOOTBALL I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Disemba 1, 2019
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza;'Micki'. Ibali lethu leHenrikh Mkhitaryan yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokudlala okuphambili kukaHenrikh Mkhitaryan kwaye ancedisa ubuchule kodwa bambalwa bacinga ubomi bakhe ngaphandle komdlalo othakazelisayo. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, vumela uqale.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UHenrikh Mkhitaryan wazalwa ngo-21st kaJanuwari 1989 eYerevan, inkulu-mkhulu yaseArmenia kubazali-owayengumdlali webhola, owayengumdlali webhola, uHamlet Mkhitaryan (uyise) kunye noMarina Taschyan (unina).
Kwi-1989, xa wayeseminyaka embalwa nje ubudala, intsapho yakhe yafudukela eFransi ngenxa yeengxabano ezaziza kuArmenia. Uyise wakhe wadlala iminyaka emihlanu kuValence kwiqela lesibini leFransi.
NgokukaHenrikh .."Xa ndakuba ngu-4, ndihlala ndikhala xa utata wayeya kuqeqesho lweqela. Njalo ekuseni ndathi, 'Tata, ndihambe kunye nawe. Nceda, nceda ndihambe nawe! '
Ngelo xesha, andizange ndikhathalele ngebhola, kodwa ndandifuna ukuba nobawo. Kodwa akazange afune ukuphazamiseka ngexesha lokuqeqeshwa ngokukhathazeka ngam ukuhamba, ngoko wafika ngesicwangciso esiqilileyo sokundikhohlisa. Ngenye intsasa, ndathi, 'Tata, ndithathe uqeqesho.'
Wathi, 'Hayi, hayi. Akukho qeqesho namhlanje, uHenrikh. Ndiya kwivenkile. Ndiza kubuya.' Wayebalekela ekuqeqesheni, kwaye ndalinda ... kwaye ndalinda. Wabuyela ekhaya emva kweeyure ezimbalwa. Akukho zikhwama zokutya. Ndilahlekile. Ndaqala ukukhala.
'Waqamba amanga! Awuzange uye esitolo! Uhambe ukudlala ibhola!
Uyise wakhe wenza oko ngokuthatha uHenrikh omncinane ukuba abukele imisebenzi yekhephu ayithandayo njengengane.
Hamlet Mkhitaryan kunye nendodana uHenrikh
Kwakhona ukususela ngaloo mini kwiwadi, uHemlet waqala ukuthatha unyana wakhe ekuqeqesheni umhlaba. U-Henrikh ukhawuleza wavelisa uthando lwebhola kwaye waqala ukulandela inyathelo zikayise njengoko wayemjonga uqeqesho. Ndihlala ndifuna ukuba ngumdlali webhola lebhola kwaye ndiyabulela abazali bam, bancedisa kakhulu ukuqonda le phupha. "
Wena nabazali bakhe befuna ibhola yebhola kodwa naye wagxininisa imfundo kufuneka ibe ngumntwana kumntwana. UMiki wafunda indlela yokudibanisa imfundo kunye nebhola kwindlela efanelekileyo kakhulu. Wakhula waba yinkwenkwana eqaqambileyo.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwigama
Wafunda ibhola kwiyise uHamlet owayengumdlali obalaseleyo ngexesha lakhe kwi-1908s. Ngelishwa, ukufa kwasekuqaleni kukayise kwakumthintele kakhulu (Iinkcukacha zokufa kwakhe ezixutyushwa kamva kwinqaku). UHenrikh uvakalelwa kukuba ukuba uyise wayesephila, "Yonke into yayiyahluka." Ngamazwi akhe, "Unyaka emva kokufa kukababa, ndaqalisa ukuqeqeshwa kwebhola. Wayengumqhubi wam, wayeyisithixo sam. Ndathi kum, Ndimele ndigijime njengaye. Ndimele ndidubule njengathi. "
Wena, uyise wakhe wamnika icebiso elisebenzayo kwiqondo lokujonga ngaphambi kokuba afe. Wayenokuvuyela uyise kuphela iminyaka eyi-7. Uyise wakhe wafa xa wayengu 7 kuphela. Abantu ababukele uMkhitaryan kunye noyise, bathetha ukuba izitayela zabo zifana kakhulu. U-Miki wathi, "Ndiyakholwa ukuba undibona kwaye uyaziqhenya ngam ..."
Xa ebuyela eYerevan evela eFransi, uHenrikh wayesazi ukuba yintoni umsebenzi ayefuna ukuyilandela. UMkhitaryan wajoyina i-club ye-Yerevan enkulu kunazo zonke i-FC Pyunik kwi-1995. Emva koko wazibona ekhula ukuba abe liqela labadlali abanamakhono kakhulu kwelizwe.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Intsapho yakhe yonke inomdla webhola. Ngoxa yena noyise bephumelela entsimini, abafazi kwintsapho yakhe baye bahlala kuyo. Ngoku uvumela intetho ngabo;
UTATA: UHamlet Mkhitaryan, uyise kaHenrikh wayengumdlali ohloniphekileyo kwaye ohloniphekileyo FC Ararat Yerevan ngexesha le-1980. Wayengumdlali omncinci kodwa osheshayo. ISoviet Soldier iphephancwadi eliye lamhlonela "Knight of Attack" ibhaso kwi1984.
Yena nentsapho yakhe behlala behlala kuyo Kentron yesithili Yerevan, e kufuphi neHrazdan Stadium ye-Amenia. Abo babone uHamlet noHenrikh badlala bathetha ukuba izitayela zabo zifana kakhulu. Ngelishwa, uHamlet wabulawa yi-brain tumor ngexesha le-33 xa uHenrikh wayeneminyaka esixhenxe ubudala.
Le ngxelo evela kuHenrikh ngokufa kukayise.
"Ixesha lam kunye noba liza kuba nefuthe kakhulu, kodwa lifutshane kakhulu. Xa ndandineminyaka emithandathu ubudala, abazali bam bandixelela ukuba sabuyela ekhaya e-Armenia. Andizange ndiyiqonde ngokwenene into eyenzekayo. Ubaba wayesekile ukudlala ibhola, kwaye wayesekhaya lonke ixesha. Andizange ndiyazi, kodwa ubawo wayenomkhuhlane wengqondo. Yonke into yenzeke ngokukhawuleza. Ngonyaka, wayesekho. Ngenxa yokuba ndimncinci, andizange ndiyiqonde ngokupheleleyo into yokufa. Ndikhumbula ndibona umama kunye nodade osekhulile bekhala njalo, kwaye ndiya kubabuza, "Uphi ubaba?" Akukho mntu unokuchaza ukuba kwenzekani. Usuku ngemini, baqala ukuxelela ukuba kwenzekani. Ndikhumbula umama esithi, 'Henrikh, akaze abe nathi.' Kwaye ndacinga, Akuzange nanini? Akusoze kubekho ixesha elide xa uneminyaka eyisixhenxe ubudala.
I wayeninzi iikopi zevidiyo edlala eFransi, kwaye ndandizijonga rhoqo ukuba ndimkhumbule. Ekubini, kathathu ngeveki ndiza kubukela umdlalo wakhe, kwaye kwakuza kunika ulonwabo olukhulu, ngakumbi xa ikhamera ibonisayo xa ebhiyozela injongo okanye ekhonkxa ahamba naye. Kuloo votapi, ubaba wayehlala. wathi UHenkhkh Mkhitaryan
UMAMA: Unina uMarina waseTarchyan wathatha inxaxheba kokubili uyise nonina emva kokuba uHenrikh ulahlekelwe nguyise.
Ngokutsho kwakhe .."Kwakunzima, kuba umama wayenomama nonina kum. Kunzima ukuba unina enze oku kuluntu. Kwakudingeka anamathele kum, kwaye ngamanye amaxesha kunzima kum nam nje ngobaba. Ndineentsuku xa ndibuya ekhaya ndisuka kuqeqesho, ndithi,Hayi, kunzima kakhulu. Ndifuna ukuyeka.. Kwaye umama wayenokuthi, 'Awuyeki. Kufuneka uqhubeke usebenza, kwaye kuya kuba ngcono ngomso.' Emva kokufa kukaba, umama wayenomsebenzi wokuxhasa intsapho yethu. Ngoko ke waqala ukusebenza kwi-football yase-Armenia.
UMarina Taschyan ude ube ngumhla intloko jikelele yeSebe leekomiti zeSizwe e-Armenia. UHenrikh Mkhitarvan wabelane ngesithombe somama nonina kwi-Twitter ukugubha usuku lokuzalwa kukaMama. Kwiposi, wathi Uthando lukaMama alunanto ehlabathini, uvuyo lokuzalwa, unina ". Uninzi lwabalandeli bakhe babengacingi ukuba unina. Oku kungenxa yokuba wayebukeka esemncinci.
USISI: Udadewabo usebenza e-UEFA. Uthanda ukufumana ubomi ngokwakhe. Ngamanye amaxesha uMiki unamnceda ngemali ayenayo amaxesha amaninzi. Kwintetho,
wamxelela ngamazwi akhe ..."Akukho nto 'into yakho neyami'. Sitsapho, kwaye yonke into esiyifumanayo yethu ".
UMikki noMonika babelana ngokuncokola kunye nabantwana. Bobabini babonakala bebuhle njengoko kuboniswe kumfanekiso apha ngezantsi.
Intsha uHenrikh (ngasekhohlo) kunye noMonika (kunene)
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
U-Henrikh Mkhitaryan yindoda enyantombazana enokuthanda ukutshata ... Nangona, maantombazana, musa ukukhawuleza kuye-uHenrikh akanalo ixesha kubo! Hayi ngoku okanye kwikamva elizayo. I-Mkhitaryan igxile kumsebenzi wayo kwaye ingatshatanga. Kwaye akananjongo yokuthandana nabani na de ade afinyelele kwixesha elide kakhulu le-30 ebeyithethile. Wena uye wabonwa ngamantombazana amaninzi. Siyakubetha ukuba uyamangalisa ukuba akanakho umfazi
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Master Chess
Xa kuthelekiswa nabaninzi bebhola kwiplanethi, kuthiwa iMkhitaryan iyahluke. Unamandla okuqonda okuphezulu. Lakhe ingqiqo kwindawo yokudlala idityaniswa naye Chess buchule. Ngamanye amazwi, uthando lukaHenrikh Mkhitaryan ngo-cihlunu ihambelana nomlinganiselo wakhe zobulumko. Akumangalisi ukuba uye wabonisa kwangaphambili ukuba abalandeli bakhe baqhankqalaza.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Idols
Ngaphandle kokumangalisa umdlali ohlasele eFransi, isithixo sikaMkhitaryan sakwa-Real Madrid CF kunye noMidiya weNdebe weFIFA weFIFA iNdebe yoMhlaba uZinedine Zidane.
NgokukaMikki ..."Ngexesha lokuba ndiyiminyaka eyi-10 ubudala, ubomi bam bonke bebhola. Ukuqeqeshwa, ukufunda, ukubukela, nokuba ukudlala ibhola kwi-PlayStation. Ndandigxininisa ngokupheleleyo. Ndithanda kakhulu abadlali bokudala - i-maestros. Ndihlala ndifuna ukudlala njengeZidane, kunye neHamati. Ndiyayixabisa kakhulu indlela yokudlala kaZidane kunye nento awayenzayo kumdlalo. Wayefana nomlingo kum. Indlela yam midlalo yokudlala idlala ngokubanzi kwiZidane ngelixa ukuhlaselwa kwengqondo kuthethwa ngakumbi kubaba wam esele. "
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ephakamileyo
Intsapho yaseMkhitaryan yabuyela eYerevan, inkunzi-dolophu yaseArmenia esuka eFransi kwi1995. Ngomnyaka ofanayo uMkhitaryan ubhalise kulo Iziko leNkcubeko kwiArmenia. Waphumelela kwiprogram yediploma waza wahamba ngokuthe ngqo ekufundeni qoqosho kwisebe laseYerevan ISt. Petersburg Institute.
Ekugqibeleni, uMiki naye wavelisa izicwangciso zokuphinda afumane esinye isiqendu emthethweni. Ngelishwa, oku akuzange kwenzeke njengokuba kuyimfuneko ukuba athathe ibhola yezemidlalo ngokugqithiseleyo yaza kubiza. Eli xesha laphawula ukukhupha okukhulu kumaphulo akhe emisebenzi. Washiya iklabhu yakhe yenkwenkwezi yaseCyprus Pyunik (e-Armenia) waza waya eUkraine ukuba adlale ibhola yeClubs Club Metalurh Donetsk eyamnika isipho esilizuzayo esamkelayo.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukuchitha iiNights kwiGround Training Training Club
Mkhitaryan Wayeyaziwa ngokuba akahlali ehlala kwindlu yakhe kodwa achitha ixesha lobusuku bakhe kwindawo yokuqeqeshwa kweqela lakhe. Yenze loo nto kuzo zonke iiklabhu azidlale ngazo.
Ethetha nephephandaba leArmenian panorama.am ngoFebruwari 2017 wathi, "Ekubeni ndibe yinto enesithixo kwaye abaninzi bajonga kum, ndikhetha ukugxila kwibhola lebhola ukuze ndibancede. Nokuba uthetha ukuchitha ubusuku ngokuqeqesha izindlu zokuphumula komhlaba. Kuzo zonke iiklabhu endithe ndazenza, ndabona ukuba iqela lam iqabane lidibanisa xa bebona ezi ziphatha kum. Baye bathiwa nguPresident [wehlabathi loqeqesho]. "
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umvelaphi weKhenketho lakhe
I-Mkhitaryan ibizwe ngegama 'Heno ' abalandeli bakhe baseArmenia. Wamkela igama yiphi ifomu elifutshane legama lakhe lokuqala 'Henrikh'. Nangona kunjalo, uyaziwa eYurophu Micki. UMkhitaryan watyhila kwingxoxo-ndlebe yokuba igama lesiteketiso uMicki lavela kumphathi wangaphambili waseBrussia Dortmund, UJürgen Klopp. Jurgen wagqiba ukumnika le nickname emva kokujonga igama lakhe 'IMkhitaryan' bekunjalo lide kakhulu ukubiza. UMkhitaryan waphendula ukuba kulungile ukusebenzisa le nickname. Ukuvunyelwa kokugqibela kwegama lesiteketiso lafika xa igama lakhe lesiteketiso laligcinwa ekuqinisekiseni Instagram i-akhawunti ogama lomsebenzisis micki_taryan.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Emva kokudlala kwiSao Paulo
Ku-2003, iMkhitaryan, owayeneminyaka eyi-14 enezilingo kunye neSão Paulo eBrazil eyaphumelela. Udlale iqela elincinane lebhola. Eli qela lalinokuthandwa ngu-Oscar dos Santos Emboaba naseHernanes. Wadlala kunye nabo. Ukuhlala kwakhe kwiklabhu kwakumfutshane. UHenrikh Mkhitaryan wabuyela ePyunik, kwiqela lakhe laseArmenia e-2004. Wayenguye umphathi wakhe uMihai Stoichiţă owayephikelela ekubuyeni kwakhe eArmenia.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I Polyglot
I-Mkhitaryan i-polyglot eqinisekisiweyo, inako ukuthetha iilwimi ezixhenxe. Ezi ilwimi ziquka i-Armenian, isiFrentshi, isiPutukezi, isiRashiya, isi-Ukrainian, isiXhosa nesiJamani. UMiki ubonisa ulwazi lwakhe lwesiRashiya kuninina ongumama, onguphi IsiRashiya buhlanga.
Wafunda iilwimi ezintathu zokuqala (i-Armenian, isiFrentshi kunye nesiPutukezi) ebuntwaneni bakhe, ngelixa ezine zokugqibela zithatha ukudlala uShakhtar Donetsk e-Ukraine, eBrussia Dortmund eJamani, naseManchester United eNgilandi.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Igalelo kunye noNcedo
Kwi-2012, ngesigqibo seBhunga leSixeko saseYerevan, kwaye ngokubhekiselele kwi-2794th yesixeko sonyaka, uMkhitaryan wanikezelwa "Isizwe sakwa-Yerevan" isihloko, ngenxa yempumelelo yakhe ebhola kunye neempumelelo zakhe ezemidlalo. Qaphela: I-Yerevan yintloko yeArmenia.
I-Mkhitaryan iyaziwa kwakhona kwilizwe layo ukuba ibe ngumntu onobubele. Ngexesha leeholide zebhola, ufumana ixesha lokutyelela imimandla ephikisanayo ye-former Soviet Union ukunikela izipho kwiintsapho zamajoni awele. Uthando lwakhe luye lwafumana umvuzo 'NKR Medal'.
NKR ithetha (Republic of Nagorno-Karabakh). Le yindondo kazwelonke enikezwe yi-NKR uNkulumbuso. Inikwe abantu ababhekwa njengamaqhawe esizwe.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -IQela leSizwe leArmenia
I-Mkhitaryan i-Armenia yexesha elide elijongene negosa eliphezulu, ibhola iinjongo ze-22 kwimidlalo yehlabathi ye-64 ukususela ekuqaleni kukaJanuwari 2007.
I-Mkhitaryan ikhethwe ngumdlali we-Armenian Umnyaka we sixhenxe (unyaka ukususela kwi-2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 kunye ne-2016). Ukhokele iqela ngokugqithiseleyo kule minyaka njengomthetheli.
Ku-2012, wavotelwa njengomdlali ongcono weShakhtar wexesha le-2011-12 ngabalandeli. Ngaloo nyaka, wabizwa ngokuba ngu-Premier League League Footballer of Year. Kwakhona kwi-2012, iMkhitaryan ibizwa ngokuba ngabadlali abaphezulu be-UEFA ye-UEFA ye-UEFA ye-European Yearbook 100-2012. Kwakhona, wavotelwa kwi-Commonwealth ye-I-Independent States yebhola lebhola leNyaka ye-2012, eyenza ibe ngumdlali webhola yase-Armenia wokuqala ukuba abe ngumdlali ongcono kunazo zonke kumazwe aseSoviet. Wamkela kwakhona ibhaso kwi2013.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iiprojekthi zeKamva
Esemncinci, uMkhitaryan unyanzelisa ukuba akayizicwangciso zokuqhubeka esebenza ebhokheni emva kokuba ethatha umhlalaphantsi. "Andiziboni ukuba ngumqeqeshi, kungekhona indebe yam itiye. Andifuni ukuba iinwele zam zigubule ngokukhawuleza! " Kunoko, ubomi emva komdlalo webhola luya kuba noxanduva lwezoshishino kwi-Mkhitaryan, onayo idiploma evela kwiNkcubeko yeChysical Culture e-Armenia kunye ne-degree kwi-Economics kwi-St Petersburg Institute.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Uphantse wajoyina iLiverpool kwi-2013
Ehlotyeni le2013, umphathi weLiverpool u-Brendan Rodgers wade wenza uMkhitaryan ukuba atyelele phambili.
Emuva kwangoko, wayengumdlali wegosa eliphambili kwi-flight ye-Ukraine ephezulu kwinqanaba elidlulileyo, ebhala iinjongo ze-25 kwimidlalo ye-29 yemidlalo yeShakhtar Donetsk. Ngalolu daba phantse lwenziwe kunye neengxelo zokubhenela e-Anfield ukwenzela ukwenziwa kwezonyango, iimeko ezibuhlungu zilandelwa. Amaqhawe aseLiverpool ayavuya. Umcimbi wokubhalisa umgca wabo oza kukhanyisa u-Anfield wayekhokelwa ngumphathi waseBurussia uDortmund uJurgen Klopp. UJurgen wenza isipho awakwazi ukuchasa kwaye wakhetha i-Signal Iduna Park njengekhaya lakhe elizayo esikhundleni se-Anfield.
Wena Mkhitaryan ugxininise ukuba kwakungeyona imali, kodwa uphawu lwebhola yebhola eDortmund idlala eyamenza wamkela isipho sikaKlopp.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Emva kokuhlala e-Hotel kunye noJose Mourinho
UMkhitaryan, ekufikeni kwakhe eManchester United wahlala kwindawo ehloniphekileyo yeHotry Hotel ngonyaka. Ukuhlala kwakhe kwakukhokelela Jose Mourinho owayehlala apho kunye nentsapho yakhe ngexesha elinye. Ngelo xesha, zombini imibutho yayisandul 'ukuhlala kwisixeko. Ingcamango yokuhlala ehotele ngaphambi kokuthenga okanye ukuqesha indlu eManchester yinto eqhelekileyo kubantu abazityebi abaza kwisixeko esikhulu ukuba basebenze. Ngokutsho kukaMicky, "Jose Wathi wayengazi ngokwenene ngedolophu ngokwayo ngaphambi kokuba eze apha. Wandicebisa ukuba ndihlale ehotele apho afike khona "
Bobabini uMourinho kunye noMkhitaryan sele behlala ngokusisigxina ngasenyakatho ntshona yeManchester.
I-Henrikh Mkhitaryan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Q kunye no
- Ngaba unayo nayiphi na into ecacileyo okanye ehlekisayo eyenzeka kuwe ukususela ekuhambeni kwakho eManchester United? Mhlawumbi ezinye iifowuni ezingavamile kunye nezinto?
- 'Ewe, ndifumana ezininzi iifowuni ... ezivela kwamanye amazwe.'
- Bafuna ntoni na?
- Bonke bafuna imali!
- Ubaxelela ntoni?
- Ndiyalahla. Ndingayinika njani imali abantu abangaziwayo okanye nje ndiboleke? Andiyi kubuyisela.
- Ngaba uyingozi, uyakholelwa ekufeni?
- 'Ewe kunjalo. Umhla wokuzalwa wazimisela isithuba sam. Kanye nje ngomnye umntu, ngokwenene. Ubomi yincwadi, kwaye sibadlali abadlala ngokubhekiselele kwinto ebhaliweyo. Ndikholelwa kwiimpawu zezodiac. NdinguAcarius
IDortmund iDayari yeDlalo
I-Man United Football Diary
Umhla oLungisiweyo: nge-24 kaJanuwari ngo-2019
Umhla oguqulwe: nge-4 kaMeyi ngo-2020
I-Shinji Kagawa Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts